Mgbachi, a na-ere elekere modular ka ọ gachara ọrụ ọtụtụ afọ | Akụkọ akụrụngwa
Ihe na-apụtaghị na CES, ị gaghị ahụ ebe ọ bụla ọzọ. Nwere ike ịmasị ngosi a karịa ma ọ bụ obere, mana ụlọ ọrụ - ọkachasị ndị pere mpe - na-achọ ịnọ mgbe niile iji nye visibiliti na ngwaahịa ha n'ụwa niile. Nke a bụ ihe mere AGBANYA, elele modular na mgbe afọ abụọ nke mmepe, na-apụta na ọnọdụ ahụ na ọnụahịa na ụbọchị ntọhapụ.
Echiche modulu abụghị ihe na-adọta ọha na eze nke ukwuu. A hụrụ na n'ime ekwentị nke onye ọrụ ahụ nwere ike ịhazi ọnụ ha nke ọma, ọ kwụsịrị ijide n'etiti ndị ọrụ. Agbanyeghị, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ gachara BLOCKS dị njikere n'ezie ịnweta ohere na ụlọ ọrụ smartwatch. Ya mere o mere: ya smartwatch enwere ike ịhazi ya ugbu a na tupu akwụkwọ; izipu mbu ga-eme ka nkeji nke mbụ nke afọ a rụọ ọrụ.
BLOCKS bụ elekere smart nke onye ọrụ n'onwe ya nwere ike ịhọrọ ọrụ ọ chọrọ na elekere smart smart a akụkụ nke ọnụahịa $ 259 (gbakwunyere $ 15 maka mbufe mba ofesi) nakwa na ọ ga-abawanye n'ọtụtụ dị ka modulu - ma ọ bụ njikọ - agbakwunye na eriri. I nwere ugbu a 6 modulu ịhọrọ site na:
Ambient mmetụta: ị nwere ike ịlele okpomọkụ, iru mmiri na nrụgide nke ikuku
Mmetụta ụda obi: ị nwere ike ịchịkwa oge niile otu obi gị si arụ ọrụ
Ikanam modul- Tinye tọọchị na ngosi atụmatụ nkanka
Smart bọtịnụ: ị nwere ike ịmalite ma ọ bụ mee ka ngwa na ọrụ nke smart watch rụọ ọrụ
Onye natara GPS: mara ọnọdụ gị n'oge niile
Extra batrị: site na usoro a nke ikike 95 mAh ị ga - enweta ikike kwụụrụ onwe nke 25%
N'ikpeazụ, dị ka anyị gwaworo gị, ọnụahịa ahụ malitere na 259 dollar (ihe dị ka 220 euro ịgbanwe) ma nwee ike ịga $ 469 (395 euro) ma ọ bụrụ na anyị họrọ modulu niile dị. Elekere na-agbada Android 8.0 Oreo —Ọ bụghị android wear- ma ị nwere ike họrọ ya na agba abụọ: nwa ma ọ bụ ọlaọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » AGBANYA, elekere modular na-ere ahịa mgbe ọtụtụ ọrụ gachara
Samsung Galaxy S9 ga-eweta na February